ရွှေဖြူးလေး: လူသားအားလုံးသို့ 
ဗုဒ္ဓဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထွန်းကားနေဆဲ ဖြစ်သော
ဘာသာအယူဝါဒများအနက် ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမူ အစဉ်တစ်စိုက် နှလုံးသွင်းခဲ့ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဝါဒသည် လူအဖွဲ့ စည်း၏ လိုအင်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိ၏။အကြောင်းသော်ကား ဗုဒ္ဓသည်လူသားမျိုးနွယ် အနေဖြင့်သာ အစဉ်နေထိုင်၍တရားဓမ္မ ဟောခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓသည် လူတို့ အား ဘဝလွတ်မြောက်မှုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုနှင့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ဖြစ်ထွန်းတိုးပွားစေရန် ဆုံးမ လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့သည်။
ကိလေသာကာမနှင့်ယှဉ်သည် ချမ်းသာကိုအဖန်တလဲလဲ ခံစားသော အကျင့် မိမိကိုယ်၏ပင်ပန်းခြင်းကို အဖန်တလဲလဲ ဖြစ်စေတက်သောအကျင့် ဤ အစွန်းနှစ်ပါးမှလွတ်ကင်းသော မဇ္ဈိမပဋိပဒါခေါ် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို ချပြတော်မူခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများသည် လက်တွေ့ ကျ၏ ဤသို့လက်တွေ့ ကျကြောင်းကို- လူအသီးသီးတွင်မတူညီသော ကိလေသာ ကိုယ်စီရှိနေကြသောကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်းသည်တစ်ခုသောပန်းတိုင်သို့တူညီညီစွာ ရောက်ရှိရန် မမျော်လင်နိုင်။ဟူသောအချက်ကဖော်ပြနေသည်။ ကိလေသာ ပမာဏအလျောက် ရောက်ရှိခံစားရသောအကျိုးတရားတို့ သည် ကွာခြားကုန်၏။
ကိလေသာနည်းပါး၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားသူတို့ သည် မြင့်မားရာသို့တက်လှမ်းနိုင်ကြသည်။ ကိလေသာများ၍စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နိမ့်ကျသူတို့ သည် နိမ့်ကျရာသို့ သာ သွားကြရသည်။ သို့ရာတွင် လူတိုင်းသည် တိကျခိုငမာသော စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုရှိလျှင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်တည်းဟူသော အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်သို့ ပင် ရောက်နိုင်ပါသည်။ထိုအမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်းသို့ရောက်ရန်ကိုမူကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရပေလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အေးငြိမ်းသော သာယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်သောညအသံတော်တို့ ကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏ နားထဲတွင်ယနေ့ ထိတိုင်
ကြားယောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဗုဒ္ဓကိုပြီးပြည့်စုံစွာ နားလည်ရန် လက်လှမ်းမမှီီနိုင်သောကြောင့် အနည်းငယ်ရှက်ရွံကောင်း ရှက်ရွံမိခဲ့ကြပေလိမ်မည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည်
ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကို မကြာခဏ ချီးမွမ်းရွတ်ဆိုကြ၍ ဗုဒ္ဓကိုဦးထိပ်ထားခဲ့ကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓဟောကြားတရားတော်များကိုမူလိုက်နာကျင့်သုံးရန် အားမထုပ်ခဲ့ကြပေ။ ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များနှင့်
အဆုံးအမများသည်ကား ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ အတွက်သာမက အခြားသော ဘာသာရေးအယူရှိသူတို့အတွက်ပင်လျှင် နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ နှစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ကုန်၏။လူတို ၏အညွန့်အဖူးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓသည် ဤကမ္ဘာလောကတွင်ကြာရှည်စွာ ပွင့်တော်မမူခဲ့သော်လည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များ၏
သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်သော ထိုရနံတို့ သည် နေရာအနှံ့ သို့ ပျံ့ နှံ့ခဲကြသည်။ကိုယ်စိတ်နှလုံး အေးငြိမ်းသောသင်းပျံ့သောထိုရနံ့တို့သည်လူသန်းပေါင်းများစွာကိုသာယာချမ်းမြေ့စေခဲ့သည်။လူမျိုးအသီးသီး၏
ဤကမ္ဘာလောကတွင်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူပြီးနောက် နှစ်ဆယ့်ငါးရာစုနှစ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။တိုင်းနိုင်ငံအချို့သည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးပျက်သုဉ်းခဲ့ကုန်၏။လူမျိုးနွယ်အချို့သည်လည်းတိုးပွားလာပြီး
ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ ကို အောင်မေ့၍ တည်ထားခဲ့သော စေတီပုထိုးများ ဆင်းတုတော်များ စာပေကျမ်းဂန်များနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအမှတ်လက္ခဏာများကိုခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အချို့သောသူများကဖျတ်ဆီးခဲ့ကြသော်လည်းဗုဒ္ဓ၏စင်ကြယ်မြင့်မြတ်သောအမည်တော်နှင့်ဗုဒ္ဓလမ်းညွန်ခဲ့သော အဆုံးအမများကိုမူဖျတ်ဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ဗုဒ္ဓ၏စင်ကြယ်မြင့်မြတ်သောအမည်တော်နှင့်အဆုံးအမများသည်
၏စိတ်ထဲတွင် ကိန်းအောင်နေခဲ့ကိန်းအောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။အကြီးမားဆုံးအောင်နိုင်မှုသည် အခြားသူများကိုနှိမ်နင်းခြင်းမဟုတ် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကို.
ကိုယ်တွင်းကိလေသာကိုတစ်ကြိမ်အောင်နိုင်သော ထိုသူကိုသာ အောင်နိုင်သူတို့ တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။(ဓမ္မပဒ၊သဟဿဝဂ္ဂ)
မဟာကရုဏာရှင်၏နှလုံးသားတွင် နူးညံ့သိမ်မွှေ့ သောအဆုံးအမများသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဆုံးသူကိုပင် မည်သို့ မည်ပုံ ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အကောင်းဆုံးပြယုဂ်အဖြစ် ဧကရာဇ်မင်းကြီး အသောက၏ ဖြစ်ရပ်ကို ပြနိုင်ပေသည်။ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်တွင်အသောကမင်းကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အခြား
တစ်ဘက်တွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော စစ်ပများကိုဆင်နွဲ ခဲ့၍ ပြင်းထန်သော နာကျင်မှုနှင့် ကြောက်ရွှံ ပူပန်မှုတို့ ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။သို့ ရာတွင် မင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓ၏ တရားဓမ္မရိပ်အောက်တွင် ခိုလှုံမိသောအခါ သူပြုလုပ်ခဲ့သောမကောင်းမှုများအတွက် နောင်တကြီးစွာရခဲ့သည်။ယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်မင်းကြီးသည်ငြိမ်းချမ်းသော လမ်းစဉ်သို့ ကူးပြောင်းပြီးလူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်ပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အသောက မင်းကြီးကို ကြီးမြတ်သော မင်းတစ်ပါးအဖြစ် သတိတရ အလေးထား ဂုဏ်ပြုကြရသည်။
စစ်မှန်သော ကြီးမြတ်မှုသည် မေတ္တာတရားမှ ပေါ်ထွန်း၍ မုန်းတီးမှုမှ မပေါ်ထွန်းနိုင်။
စစ်မှန်သောကြီးမြတ်မှုသည် မိမိကိုယ် ကိုနှိမ့်ချမှုမှ ပေါ်ထွန်း၍ ထောင်လွှားမှုမှ မပေါ်ထွန်းနိုင်။
ဧကရာဇ်မင်းကြီး အသောက၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုမှ ကြင်နာသနားမှုသို့ ကူးပြောင်းလာခြင်းကို သူ၏နိုင်ငံအတွင်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသက်ကိုပကိုပင်လျှင်သတ်ဖြတ်ခြင်းမှတားမြစ်ထားခြင်းကပြီးပြည့်စု
စေပါသည်။တိုင်းသူပြည်သားများအား ရင်ဝယ်သားကဲသို့ ချစ်သောမင်းကြီးသည် သူ၏တိုင်းသူပြည်သားများသည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်မှုကြောင့်သာ သူတစ်ပါး၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုခိုးယူကြခြင်းဖြစ်သည်။ဟု သိမြင်၍ သူနိုင်ငံအတွင်းဆင်းရဲမှု
တို့လျော့ကျနည်းစေရန် ရှေးရှုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထိုပြင် ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ အားဗုဒ္ဓဆုံးမတော်မူခဲ့သည်အတိုင်း အခြားဘာသာရေးဂိုဏ်သားတို့ အပေါ် မည့်သည်အခါမျှ ဖိနှိပ်ရှုတ်ချခြင်း ကဲ့ရဲ့ ခြင်းမပြုရဟူသော မင်းကြီး၏ မှာကြားချတ်သည် မင်းကြီး၏ စိတ်နှလုံးနူးညံ့ခြင်း သဘောထားကြီးခြင်းတို့ ကို ဖော်ပြနေသည်။ အသောကမင်းကြီး၏ နောက်ပိုင်းခေတ်တွင်အချို့ သော ဘုရင်တို့ သည်မိမိတို့ ယုံကြည်သောဘာသာရေး အယူဝါဒတို့ ပျံ့ နှံ ထွန်းကားစေရန် အကြမ်းဖတ်နည်းကို စွဲကိုင်လာကြသည်။
လူဘောင်အဖွဲ အစည်းများကို ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့်ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် အလို့ ငှာ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များကိုလေ့လာမှတ်သား၍ နာယူကျင့်ကြံ ကြမည်ဆိုပါလျှင် ခပ်သိမ်းသော လူတို့၏ပြဿနာများကို ပို၍ပို၍နားလည်သိမြင်လာပေလိမ့်မည်။ဗုဒ္ဓသည် လောကကို အောင်နိုင်သူတို့ တွင် အကြီးမြတ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓသည် မိမိ၏ မလွဲမှားနိုင်သော မေတ္တာလက်နက် သစ္စာလက်နက် တို့ ဖြင့် လောကကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များသည်လည်း လူတို့ အား မုန်းတီးမှုဒေါသ ၊ဆင်းရဲ ခြင်းဒုက္ခ မည်သော အမှောင်ကမ္ဘာမှ ၊ချစ်မြတ်နိုးမှုမေတ္တာ ချမ်းသာခြင်းသုခ မည်သောအလင်းကမ္ဘာသစ်ဆီသို့ သွားရာလမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေကုန်၏။
စင်စစ် လူတို့ ၏ အညွှန့် အဖူးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓသည် ဤကမ္ဘာလောကတွင် ကြာရှည်စွာပွင့်တော်မမူခဲ့သော်လည်းဗုဒ္ဓ၏ သင်းပျံ့ သော ခြိမ်းချမ်းရေးမှာတမ်း ရနံ့ တို့ မှာမူ ထာဝစဉ် တည်မြဲနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
[Dr.Dhanmanada"message for All ". what Buddhists Believe,Expended 4"th Edition, malayaia:Buddhist missionary society,2oo2,53-56ကို မြန်မာပြန်ဆိုထားသည်။]
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 9:48 AM